duubista waraaqda Warshadaha, Alaab -qeybiyeyaasha - Soo -saareyaasha warqadda duuba ee Shiinaha
dahaarka sanduuqa sanduuqa isku laab
darajada cuntada FBB.SBS
Tusmada ugu hooseysa ee GC1. GC2
NINGBO FOLD C1S Guddiga maroodiga
warqad/loox farshaxan la huwiyey
Waraaqda farshaxanka C1S / loox
Waraaqda farshaxanka C2S / loox
loox farshaxanka bulk sare
warqad dib -u -dhigid / nuqul
warqad dib -u -dhigid ah
Warqad biodegradable -ga leh oo dahaarka leh
warqad macdan ah
loox liner ah
sanduuq jiingad ah
Waraaqaha koobabka ee EPP
Warqad koob dahaarka leh ee PE
warqad dhejis ah
warqad kraft/PE dahaarka leh
Alaabta waraaqaha la dhammeeyay
warqad farshaxan dahaar leh
Weelka miiska cuntada lagu rido ee weelka cuntada saxarka ah ...
tayo sare leh shiinaha jumlada dib loo warshadeeyay astaanta loo habeeyay ...
warqadda duubaya ee caddaynaysa cuntada cuntada degdega ah ee la diyaarshay
Heerka jumlada cuntada Waraaqaha bireed -bireed s ...
Uur -ku -jirta dahaarka leh ee Dahaarka leh ee lagu daboolay 100% Bio ...
Paper Paper Specialty Printing Color Color for cus ...
Warqadda guddiga tijaabada ee dib loo rogay oo leh ujeedada gadaashiisa bunni ...
Super Box C1S laabanto Board/ GC1 guddiga fool maroodi/ B Sare ...
Tayada ugu sareysa ee OEM guddiga foolka maroodiga/Guddiga FBB/SBS ...
Sumcadda Isticmaalaha Wanaagsan ee C1s Guddiga Ivory - Dib loo warshadeeyay ...
Warqad Dib -u -Dhoofinta Sannadka 8 ee Buugga Xusuusta - Qua Top ...
caadadii daabacay cuntada cuntada degdeg ah duubaya caddayn ...
Qiimaha Warshadda OEM Gift Paper Packing La daabacay 25 ...
Cinwaanka: QOLKA 1303-2, NO.158 TAIAN WADDLE WIDDLE, SHOUNAN STREET, YINZHOU, NINGBO
Ku qaad si aad u ogaato “kacdoonkii cagaarnaa ...
Dukaamaysiga onlaynka ah iyo kan tooska ahba waxaa la socon doona baakado badan. Si kastaba ha ahaatee, agabka aan deegaanka ahayn iyo baakadaha aan caadiga ahayn waxay dhulka u horseedi doonaan wasakhowga deegaanka. Maanta, warshadaha baakadaha ayaa maraya "kacaan cagaaran", oo beddelaya wasakheynta m ...
Aynu qabano cayaar xaalufinta cawska
Caaggu wuxuu ku qoran yahay mid ka mid ah wax -soo -saarka ugu weyn qarnigii 20 -aad. Caaggu wuxuu la mid yahay seef laba af leh. In kasta oo ay noo keenayso ku -habboonaan, waxay sidoo kale deegaanka u keenaysaa culays weyn. Si looga hortago wasakheynta caddaanka, dalal kala duwan waxay leeyihiin iss ...
Markaad tan akhrido, miyaad ku dhiirran doontaa inaad cabto ...
Dad badan, bilow fiican waa kala bar dagaalka. Shaqada subaxdu waxay bilaabmaysaa ka dib koob kafee qaxwe ah ... Waqtigan, kafeynku wuxuu ku xidhaa soo -dhoweeye gaar ah oo maskaxda ku jira, taasoo ka dhigaysa maskaxdu inaysan heli karin calaamado "daal", sidaa darteed waxay dadka siinaysaa kor u qaadista saamaynta tamarta. Howe ...
Ku soo biir warshadda saxarka APP oo arag sida loo ...
Laga soo bilaabo isbeddelka sixirka ee geedka loo beddelo warqad, habkee loo maray iyo sheeko noocee ah ayay lahayd? Tani ma aha hawl fudud. Ma jiraan oo kaliya lakabyo habraacyo, laakiin sidoo kale heerar sare iyo shuruudo adag. Waqtigaan, aan u gudubno warshadda saxarka ee APP si aan u sahamino t ...
Warqad koob oo waraaqo ah oo Zero ah oo la helay TÜV ...
Maajo 25 -keedii, madaxweyne -ku -xigeenka sare ee TÜV Rheinland Greater China wuxuu siiyay DIN CERTCO iyo Ururka Bioplastics Association shahaadooyinka shahaadadda digirta warshadaha APP Sinar Mas Group Industrial Paper. Badeecadda la xaqiijiyay waa warqadda koobabka warqadda Zero Plastic® ee APP Si ...
KU BIIR Wargeyskeena